Wararkii u dambeeyey Dhuusa-Mareeb & Kulankii maanta oo aan qabsoomin, maxaase keenay.
MUQDISHO(P-TIMES) – Madaxda dawladda Faderalka & Dawlad gobaleedyada xubnaha ka ah oo ku shirsan magaalada Dhuusa-Mareeb, labadii maalmood ee lasoo dhaafayna yeeshay wada hadalo dood adag ay dhexmartay oo ku wajahnaa doorashooyinka dalka ayaan maanta yeelan wax kulan ah, marka laga reebo kii ay kasoo baxeen Saqdii dhexe ee xalay.
Madaxdu maanta, waxay kulamo gaar-gaar ah la yeelanayeen wafdigooda oo ay ka wada hadlayeen arrimaha kulamadooda ka dhacay oo ay xog wareysi siinayeen, waxayna ka dib caawa ama berrito markale yeelan doonan kulan kale oo ay arrimahan ku faaqidayaan.
Dawlad gobaleedyada, Jubbaland & Puntland ayaa doonaya qabsoomida doorasho ku dhacda waqtigeeda, waxayna sheegeen in doorasho qof iyo cod ah aysan suuragal ka aheyn waqtigan gudaha dalka, oo ay ahayd in ladiyaariyo waqti ku haboon.
Sidaas oo kale Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa sheegay in la qabanayo doorasho qof iyo cod ah oo ay doonayaan in ay ka dhacdo dalka, laguna gaari karro ugu yaraan codka oo dadweynaha loo dhaweeyo.
Sida muuqata wali dhinacyada is fahamkooda ayaan suuragalin, waxaana Ajendaha bilowga ah ay isku fahmi la’ayihiin, iyadoo qodobada ugu adag ay tahay uun arrinta doorashada oo ah dooda ugu culus ee hadda taagan.
Haddii ay xal rasmi ah gaari wayeen ka hor 23ka bishan, kulanka ayay ku kala tagi doonaan, waxaana ugu yaraan xalka ugu weyn hadda loo arkaa in ay markale dib iskugu soo laabtaan, iyadoo la saarayo guddiyo farsamo oo arrimahan wada hadalkooda sii wada.